Sidee ayay shirkadaha cannabis uga ganacsadaan kaydka marijuana?
Sidee ayay shirkadaha cannabis ganacsiga uga ganacsadaan?
Thomas Howard, oo ah iibiyaha kaydka hore & qareenka hadda ka shaqeeya xashiishadda ayaa sharxaya.
Xiddig soo kacaya iyo Qareen soo baxaya, kaasoo keliya 2% qareennada ay helaan oo keliya. Ku tababbarashada dacwadda qandaraaska iyadoo diirada la saarayo ganacsiyada xashiishadda.
Maalin kasta, waxaan ka jawaabayaa hal su’aal oo bilaash ah oo ku saabsan arrimaha sharciga.
Weydii maanta adiga.
Shirkadaha marijuana waxay marayaan Kanada iyagoo kusii jeeda Suuqa Mareykanka.
La shaqeynta Tom Howard waxay ahayd mid weyn. Wuxuu naga caawiyay inaan dhex galno heshiisyada guryaha kirada, oo aad iyo aad ayuu u aqoon iyo caawin badan yahay!
GUDDO GAAR AH!
La-tashi bilaash ah Qareenka Beeraha Illinois
Maya mahadsanid, Ma doonayo deeqdan.
Xashiishad maqal iyo muuqaal
Soo Koobid Fiidiyaha Qareenka Cannabis
1. Garyaqaanka cannabis ee Illinois & ganacsade hore oo iibiya Tom Howard wuxuu sharraxayaa in shirkadaha xashiishadda ay u adeegsanayaan shirkadda saamiyada ee loo yaqaan 'Toronto Stock Exchange (TSE)' inay ku wareegaan Sharciga Maandooriyaha La Maareeyay (CSA) oo ay liis gareeyaan kaydkooda marijuana ee ku saabsan isweydaarsiga Mareykanka sida Nasdaq - tusaale ahaan Tilray ( Daq: TLRY)
2. Si loo ilaaliyo ganacsigaaga xashiishadda, fadlan dib u eegis la xiriir xafiiskayaga maanta - tel: (309) - 699-4691: Ganacsiyadayaasha Cannabis waxay la kulmaan hubanti la'aan badan iyo helitaanka suuqyada raasamaalku waa wax weyn oo ka mid ah.
3. CSA-da waxay adkeyneysaa - haddii aysan suurta gal ahayn - shirkadaha xashiishadda Mareykanka inay liis garaystaan ​​suuqa saamiyada sababtoo ah waxaa diley dembiyo federaali ah oo ka dhashay jadwalka marijuana ee I.
4. Kanada waxay leedahay xashiishad sharci ah ilaa iyo Oktoobar 17, 2018, sidaa darteed shirkadaha sida Aurora Cannabis inay laba-meelood ku wadaagaan saamigooda TSE ka dibna ay sidoo kale ku qoraan Nasdaq.
5. Maamulka Trump ma uusan qaadin wax talaabo ah oo lagu joojinayo ka ganacsiga xashiishadda cannabis ee Canada sida Tilary, ama Aurora, laakiin markii la tuuray Jeff S fadhiyada - waxaan saadaalin karnaa kaliya haddii waaxda cadaalada ama gudiga amaanka iyo gudiga sarifka ay qaadi doonaan talaabooyin lagu xakameynayo ganacsiga xashiishadda cannabis.
6. TSE wali ma aysan oggolaan liistada shirkadaha cannabis ee maamusha hantida Mareykanka sababta oo ah waxay ku xadgudbeysaa CSA sida ku xusan sharciga Mareykanka, laakiin hawlwadeeno badan oo ka shaqeeya xashiishadda cannabis ayaa kala gooyaya shirkadooda si ay u oggolaadaan liiska labada.
7. Liistada laba geesood ee xashiishadda cannabis waxay u oggolaaneysaa shirkadaha ka shaqeeya labada Mareykanka iyo Kanada in ay suuqa dhex dhigaan Kahor inta Mareykanku uu ka ridayo Cannabis CSA haddii biil la mid ah kan Chuck Schumer uu ku soo kordhiyey Golaha Guurtida. Markaa iska ilaali.
8. Haddii aad su'aalo ka qabtid Qareenka Cannabis, la xiriir xafiiskayaga maanta wixii caawimaad ah ee lagu xalin karo qareenadayada ganacsiga ee xallinta daroogada cannabis.
Xiriirimaha Suuqa Xashiishka Dheeraad ah
Halkan waxaa ah maqaal faahfaahsan oo loogu talagalay 'Forbes' oo sharraxaya sida shirkadaha Mareykanku u adeegsadaan soo-gaadhistooda Kanada si ay u liis gareeyaan saamigooda labada waddan si loogu diyaariyo sharci-dejinta:
Macnaha guud, shirkadaha lala xiriirinayo marijuanaada ayaa runtii soo gaaraya guud ahaan, iyada oo leh laba ETF-yada waaweyn, the Horizons Marijuana Tusmada Sciences Life ETF (OTC: HMLSF) (TSE: HMMJ) iyo the ETFMG Beddelka goosashada ETF (NYSE: MJ) ka ganacsiga is-weydaarsiga saamiyada waaweyn, iyo ganacsiyada sida wershadda haramaha Cronos Group Inc. (NASDAQ: CRON) iyo teknoolojiyadda ku saleysan cannabinoid Dawooyinka GW dawooyinka PLC- ADR (NASDAQ: GWPH) liistada Nasdaq, iyo Kobcinta Awoodda ka ganacsashada NYSE.
Exceprt qodobka aad u faahfaahsan ee Bezinga ee ku saabsan tillaabooyinka looga qeybqaato ganacsiga marijuana - sida digniin uga timid dillaaliin hore - kaydka OTC ma aha wax dareere ah waxayna dhibaato ku qabaan ganacsiga ganacsiga soo gelista iyo bixitaanka - waa laguu digay laakiin inbadan… akhri halkan oo dhan: